> Resource> Utility> Olee otú iji Detuo & mmepụta oyiri nkebi nkebi / Draịvụ
Mmepụta oyiri nkebi bụ usoro ịmepụta otu kpọmkwem oyiri nke otu nkebi ka ọzọ nkebi ma ọ bụ ike mbanye. Ọ na-enyere gị aka iṅomi ihe ọ bụla na-agụnye Windows, mmemme, faịlụ, na ntọala. Ndị ọzọ okwu, mmepụta oyiri nkebi bụ ndabere, oyiri, mmepụta oyiri, aga ma ọ bụ akwagakwa si ​​ochie nkebi / disk ndị ọhụrụ, ya mere, nkebi mmepụta oyiri nwere ike chebe gị data ọnwụ si omume njehie ma ọ bụ ụfọdụ ihe mberede.
Nọmalị mgbe ndị mmadụ na-azụta ọhụrụ ike mbanye na chọrọ nweta nkwalite kọmputa, ha ga-ahọrọ idetuo nkebi n'ihi na ha achọghị reinstall niile omume ha na-eji ugboro ugboro, na-azọpụta a otutu oge site a nanị cloning na na mkpa iji wụnye ọhụrụ diski ike n'ime kọmputa.
Olee otú Detuo nkebi nkebi / Draịvụ?
The mmepụta oyiri Genius na Wondershare WinSuite 2012-eji ala na a pụrụ ịdabere na Usoro nkwado ndabere na mpaghara gị sistemụ arụmọrụ na diski ike ọdịnaya jidesie ọzọ ọhụrụ ike mbanye ma ọ bụ nkebi. ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-nwere ọrụ dị ka ndabere na weghachite faịlụ, nchekwa, partitions ma ọ bụ disk, wdg
Get Wondershare WinSuite 2012 ebe a
-Agba ọsọ na usoro ihe omume na kọmputa gị na-abanye na "Disk Management" menu, ebe ị nwere ike nweta ihe mmepụta oyiri Genius. Mgbe ahọrọ "mmepụta oyiri One nkebi" ime na.
Nzọụkwụ 1: Họrọ a isi iyi nkebi
Họrọ isi iyi nkebi si ndepụta na ị chọrọ mmepụta oyiri. Lee, anyị họrọ idetuo Obodo Disk (E :), wee pịa "Ekem".
Nzọụkwụ 2: Họrọ a ebe nkebi
Mgbe ahọrọ ebe nkebi nkwado ndabere na mpaghara nkebi jidesie otu ma ọ bụ ọzọ disk, na pịa "Ekem". Ọ bụrụ na ị chọrọ mmepụta oyiri nkebi ọzọ disk, họrọ ya si ndọpụta ndepụta na Step1.
Nzọụkwụ 3: mmepụta oyiri nkebi
Tupu cloning, ọ ga-popup ihe anya na-echetara gị na ndị niile na data na họrọ lekwasịrị nkebi ga-overwritten. Ọ bụrụ na ị na akwado mmepụta oyiri, Pịa "Ee", na ọ na-amalite idetuo nkebi.
Dị nnọọ na-eche maka sekọnd ole na ole maka ọganihu nke cloning.
1. The disk kwesịrị enweghị erughị abụọ partitions.
2. Na ikike nke ebe nkebi bụ hà ma ọ bụ buru ibu karịa isi iyi onye.
3. Mgbe ẹkụre, ma ọ bụrụ na disk na ị cloned dere Windows nkebi ya, e ukwuu tụrụ aro, gbanyụọ kọmputa na-ewepụ ndị disk na ị na-adịghị mkpa, mgbe ahụ, reboot gị na kọmputa, na ị pụrụ ime ka ya n'ime Windows.
Olee otú Naghachi Lost nkebi na Mac
Olee otú Idozi Atapi.sys Blue ihuenyo Error